कोठामा हिटर र कोइलाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी अपनाउनु होस् सावधानी !! | सुदुरपश्चिम खबर
कोठामा हिटर र कोइलाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी अपनाउनु होस् सावधानी !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : १७ पुष २०७८ २०:२८
देशका विभिन्न भागमा बर्षासहित हिमपात हुँदा चिसो अत्याधिक बढेको छ । चिसोबाट बच्न कोठा तताउन प्रयोग गरिने हिटर, कोइला लगायतले ज्यानै जान सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउन विशेषज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् । छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बमका अनुसार हिटर, गिजर प्रयोग गर्दा वा कोइला बालेर सुत्दा अक्सिजनको खपत बढी हुनुका साथै कार्वन मोनोअक्साइड ग्याँसको मात्रा बढ्छ । भेन्टिलेशन नभएको गुम्म परेको कोठामा हावाको ओहोरदोहोर हुन नपाउँदा रङ र गन्धहीन कार्बन मोनोअक्साइडले मानिसको मृत्यु हुन सक्छ ।
डा. बमका अनुसार कार्वनमोनोअक्साइड श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सोमा पुग्छ भने फोक्सोबाट रगतको नलीमा पुग्छ, जुन रक्तकोशिकामा हेमोग्लोबिन भन्ने तत्व हुन्छ । रक्तसञ्चारमार्फत मस्तिकमा पुग्नुका साथै शरीरको पुरै अंगमा त्यही ग्याँस पुग्छ । कार्बन मोनोअक्साइड रक्त सञ्चारमार्फत टाउकोमा पुग्दा टाउको दुख्ने, बान्ता आउला जस्तो हुन्छ । त्यो अवस्थामा थाहा नपाएको खण्डमा मान्छे अर्धचेत अवस्थामा पुग्छ । त्यसबेला मुटुको गतिमा परिवर्तन आउँछ र कार्बन मोनोअक्साइडको पोइजनिङ भएर मानिसको मृत्यु हुन्छ ।